Vavaky ny mpitsara marina. ? Katolika tany am-boalohany sy ho an'ny olona
8 Famakiana Min
Vavaka ho an'ny Mpitsara marina Io ilay iray izay miantefa amin'i Jesosy Kristy Tompo izay mpitsara tokana antsika eo anatrehan'Andriamanitra Ray.
Zava-dehibe ny fahalalana fa ny vavaka tsy maintsy atao amin'ny finoana.
Ny tenin'ny Tompo dia mampianatra antsika fa raha mitady azy isika dia mila mino fa hihaino azy hihaino antsika Izy ary izany no tsiambaratelon'izany rehetra izany, ny hino.
Raha tsy misy finoana vavaka teny tsy misy dikany izy ireo izay tsy mahatratra zavakanto ary tsy mahatanteraka ny antony nanaovana azy.
Noho izany rehetra izany dia ilaina ny mahafantatra hoe inona ny antony lehibe mahatonga antsika hivavaka, maro ny olona no manontany ny mpitsara marina amin'ny fomba mahazatra fa tsy avy amin'ny fo ary avy eo ny vavaka dia very fahombiazana.
1 Inona ny vavaky ny mpitsara marina?
1.1 Vavaky ny mpitsara katolika tokana
1.2 Vavaka ho an'ny mpitsara marina
1.3 Ny vavaka dia mitsara fotsiny hanafaka ny voafonja
1.4 Vavaky ny mpitsara marina ho an'ny raharaha sarotra
2 Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka?
Inona ny vavaky ny mpitsara marina?
Mr. Jesucristo Izy dia sakaizanay, rahalahintsika ary Mpitsara Izahay.
Betsaka ny zavatra angatahina aminy ary iray amin'ireo fangatahana mahazatra indrindra ny fiarovana antsika sy ny ankohonantsika.
Betsaka ny kristiana no mivavaka io isan'andro io ary tsy maintsy izany satria isan'andro no miady ny ratsy ary tsara foana ny miala ao an-trano miaraka amin'ny fiarovana ny mpitsara marina momba ny tsirairay avy amintsika.
Vavaka natao avy ao am-po io satria ataontsika eo an-tananao ny zavatra akaiky indrindra ananantsika izay ilay zanatsika sy fianakaviantsika amin'ny ankapobeny.
Ataovy ity vavaka ity alohan'ny hanombohana ny dia isan'andro, miaraka amin'ny fianakaviana iray amin'ny sakafo maraina Tena hevitra mety tsara izy io satria amporisihinay koa ny fampiharana ny firaisana ao amin'ny fianakaviana ary manatanteraka izay lazain'ny tenin'i Die soque raha manaiky ny roa na telo ary mangataka amin'ny Ray amin'ny anaran'i Jesosy dia hanome ny fangatahana avy any an-danitra izy.
Vavaky ny mpitsara katolika tokana
Andriamanitra Mpitsara sy Andriamanitra marina izay maninjitra ny tananao amin'ny mahantra sy manankarena!
Ilay fitiavana ny famelan-keloka sy ny fitiavana, ny fahazavana ara-panahy izay manazava ny lalana maizimaizina, Tenin'ny fiainana sy ny fitiavana lalina, Ny fampianarana sy ny fijoroana ho vavolombelona izay mamelona antsika amin'ny vavaka.
Ianao izay nijaly sy mahamenatra mahatsiravina indrindra, fa ny maha masina sy madio no ekena tamim-panetren-tena ny sazy ratsy indrindra, Ianao izay mpanjakan'ny mpanjaka, izay miaina sy manjaka amin'ny ratsy rehetra sy ny olombelona rehetra, no raisina fa tsy mimonomonona na manaratsy indrindra ratra maharary, ary efa natolotrao ny zava-drehetra ho famonjena anay, Avelao ho tonga aminao ny vavakay sy ny fangatahanay.
Ireo demonia sy fanananao no nitsoaka tamin'ny herin'ny fivavahanao, natsanganao ny marary tamin'ny fandriany, nositraninao ny jamba tamin'ny mason'izy ireo, niverina ho salama tamin'ny boka ianao, nanome aina sy mofo ho an'ireo izay nanaraka anao.
Nomenao ny trondro sy ny mofo homenao ny vahoaka, nosokafanao ny rano ka nandia azy ireo, nanome andro aman'alina ianao, fiadanan-tsaina sy firindrana, ianao ilay mpitsara marina tsy am-pisalasalana miaraka amin'ny olonao, tsy misy fetra omenao ny zavatra rehetra, Ary manatanteraka ny fampanantenanao ianao, Rehefa tonga ny mpivavaka iray, tsy manambany na mivadika ianao, Tsy manafintohina na mandratra ianao, mampianatra anay amin'ny alalan'ny fanoharana ianao, mametraka lova mandrakizay ao amin'ny Soratra Masina, mihaino ny vavakay ianao ary mahazo sitraka aminao izahay.
Fomba fitaizana mandrakariva ny vavaka, ho fanampin'ny fangatahantsika, ny fiderana sy ny fisaorantsika an'Andriamanitra fa manome antsika sy ny fianakaviantsika fiarovana isan'andro.
Rehefa manao izany vavaka izany dia fantatsika ary mino fa ny fiarovana avy amin'Andriamanitra dia mialoha antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika amin'io andro io.
Ny fiangonana katolika dia manana modely amin'ny vavaka ho an'ny Mpitsara marina tany am-boalohany, ao amin'ity ohatra amin'ny vavaka ity no ahitantsika fa manomboka amin'ny fanekena ny toetran'i Jesosy Kristy rehetra ary avy eo dia manao ny fangatahana sy mifarana amin'ny alàlan'ny fisaorana ny fankasitrahana nomena, ity farany ho toy ny fihetsika maneho finoana. Efa vita ny fahagagana.
Vavaka ho an'ny mpitsara marina
Ireo bibidia mamely ahy, ny Liona izay mierona amiko, ny zava-dratsy no eo anilako, mahatsapa ny tahotra sy ny fangirifiriana aho. Tsy afa-mandeha intsony aho, matahotra ny tsy rariny,
Mihomehy ny fahavaloko, Mino izy ireo fa manana hery, ary na dia miseho ho tompon'antoka aza aho, misy Mpitondra ambony, ary tena manampy ahy tokoa.
Tonga ny Mpitsara iray, manatona haingana ahy, esory ny ratsy rehetra, Ny olona hafa manafika sy mampijaly ahy, Tonga ny Mpitsara, manatona ahy haingana.
Nikiakiaka aho ary nitady ny fisianao teo amin'ny fiainako, olona marefo aho, mitady anao ary tsy mahita anao aho, Avia, ho tonga Mpitsara malalako.
Enga anie ny famosaviana sy ny faharatsiana, izany vetaveta sy santeria, Enga anie ny devoly sy ny mpanota, Bend ny lohanao, mandehana lavitra ahy, Mihemotra, Vonjeo ny mpitsara fotsiny, mangataka anao aho.
Ho avy ny fahatoniana sy ny fahatoniana, ny lehilahy efa nitehaka sy nankalaza ny anaranao masina, Misaotra, omeko anao ny mpitsara marina anao, Misaotra mandrakizay, Hallelujah, Amena.
Io vavaka manokana io dia misy noho ny herin'ny herisetra hita amin'izao fotoana izao, dia sarotra be ny midina eny an-dalambe amin'ny andro rehetra ary tsy mahatsapa ny rivotra iainana amin'ny angovo ratsy.
Izay no antony maha-zava-dehibe io vavaka io, satria nangataka ny mpitsara marina izahay hitondra fandriampahalemana sy fandriampahalemana ao am-pon'ny olona ka hijanonana ny herisetra.
Ny fon'i Jesosy Kristy tsara ihany no afaka manova ny fo ho amin'ny tsara ary maniry tsara ho fitahiana.
Nd tsaratsara kokoa ny fampitsaharana ny fanararaotana sy ny herisetra toy izay vavaka feno finoana, fikasana tsara, tsy misy fitiavan-tena ary namboarina tamin'ny fanahy.
Ny vavaka dia mitsara fotsiny hanafaka ny voafonja
Ry Jesosy Tompo ô. Teraka afaka ianao.
Mahery ny fanahinao mahery indrindra, na dia toa tsy misy aza ny vatanao.
Izy izay ilay fanatrehanao Andriamanitra dia ao aminao, miaraka aminao lalandava.Manasa aho ny fanatrehana ara-panahy ao anatinao ary mangataka anao hanafaka anao, ny fahalalahana mifandraika amin'ny zavamiaina rehetra amin'ny alàlan'ny fieritreretana.
Izaho no varavarana misokatra izay tsy misy olona afaka manakaiky ahy ary io varavarana io izay mitondra anao amin'ny fiadanana, amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namanao, amin'ny tsara sy ny fahasambaranao, dia hisokatra malalaka sy marina, izao ary mandrakizay.
Ity didim-pitsarana ity dia mitsara tanteraka amin'ny famoahana ny gadra dia mahery.
Ny miaina an'io fotoana ratsy io miaraka amin'ny mpianakavy na namana iray dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo traikefa ratsy indrindra azonao aleha.
Ho an'ireo izay manala ny fahalalahana dia dingana manaintaina izay matetika ny vavaka no hany manome fiadanana sy fanantenana.
I Jesosy Kristy Mpitsara Marina dia angatahina mba handinihana indray ny fanapahan-kevitra raisina, hosokafana ny fahazoan-kevitra ary afaka mihetsika eo amin'ny lafiny ny rariny.
Toy izany koa, ny fangatahana dia azo hitarina mba hangataka fandriam-pahalemana sy faharetana kely, manandrana manao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, mifona ho an'ny mpiara-belona amintsika.
Vavaky ny mpitsara marina ho an'ny raharaha sarotra
Andriamanitra sy mpitsara marina sy velona, ​​ny masoandro maharitra amin'ny fahamarinana, izay tafiditra ao an-kibon'ny masin'i Maria Virjiny ho an'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona.
Mpitsara marina, mpamorona ny lanitra sy ny tany ary maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavako.
Ianao, izay nofonosina lambam-paty ary napetraka tao am-pasana namboaranao tamin'ny andro fahatelo, dia mpandresy FAHAFATESANA ary avy any amin'ny helo. Ry mpitsara marina sy masina, henoy ny fangatahako, henoy ny fangatahako, henoy ny fangatahako ary omeo azy ireo ny fandefasana tsara.
Ny feonao tsy manam-pahalemena dia nanamaivana ny tafio-drivotra, nanasitrana ny marary ary nanangana ny maty toa an'i Lazarosy sy ilay vadin'ny vadin'i Naim.
Nandositra ny demonia ny fanjakan'ny feonao, ka nahatonga azy ireo handao ny vatan'ny olona, ​​ary nampahiratra ny jamba, niteny tamin'ny moana, henoy ny marenina ary avelao ny heloky ny mpanota, toa ny Magdalena sy ny lumpy. avy amin'ny dobo.
Lasa tsy hita maso ny fahavalonao, ireo izay nandeha nigadra dia lavo tamin'ny tany tamin'ny feonao, ary rehefa lany tamin'ny hazo fijaliana ianao, dia nampitolagaga ny volanao mahery. Nosokafanao an'i Piera ny fonja ary nalainao azy tsy mbola hitan'ny mpiambina an'i Heroda izy.
Namonjy an'i Dimas ianao ary namela ny fijangajangana.
Miangavy anao aho, Mpitsara marina, afaho amin'ny fahavaloko rehetra, izay tsy hita maso ary tsy hita maso: ny Tsitoha masina izay nofonosinao dia manarona ahy, ny aloky ny masonao dia manafina ahy, ny voaly manarona ny masonao manajamba izay manenjika ahy sy ireo maniry ahy ratsy, mana-maso ary tsy mahita tongotra manana aho ary tsy manatratra ahy, ny tànana ary aza maka fanahy ahy, ny sofina ary tsy mandre ahy, ny lela dia tsy miampanga ahy ary ny molotrao dia mangina ao amin'ny fitsarana rehefa manandrana manisy ratsy ahy izy ireo.
Oh, Jesosy Kristy Mpitsara Iray sy Andriamanitra! Ô, mankasitraka ahy amin'ny karazana angu sy ny fahoriana rehetra, ny fantsona ary ny fanoloran-tena, ary ampianaro aho ary miantso ny fanjakan'ny feonao mahery sy masina izay miantso anao hanampy ahy, misokatra ny fonja, mifatotra ny gadra ary tapaka ny fatorana, tapaka ny kodiarana sy ny hidy, niondrika ny antsy ary voarangotra avokoa ny fitaovam-piadiana rehetra amiko. Tsy misy soavaly ny soavaly, ary tsy mijery ahy ny mpitsikilo.
Ny ranao no nahafaty ahy, ny vavanao no nanarona ahy, ny tananao no nitahy ahy, ny herinao nanafina ahy, ny hazo fijalianao no miaro ahy ary ho ampingako eo amin'ny fiainana sy amin'ny fotoana hahafatesako.
Ry Mpitsara marina, zanaky ny Ray Mandrakizay, fa miaraka Aminy sy amin'ny Fanahy Masina ianao, dia Andriamanitra marina iray!
Nahatonga ny olona Andriamanitra Teny!
Miangavy anao aho mba hanafina ahy ny akanjo maodin'ny Trinite Masina mba hialanao amin'ny loza rehetra ary hankalazana ny anaranao masina.
Mivavaha amin'ny vavaky ny mpitsara masina sy marina ho an'ny tranga sarotra am-pinoana lehibe!
Jesosy Kristy, fony izy teto an-tany, dia vavolombelona mivantana izay azon'ny sain'olombelona natao, nahatsapa izany tamin'ny nofony izy rehefa nanapa-kevitra ny hanome ny fiainany ho an'ny fitiavanay antsika.
Izany no antony tsy misy olona tsara noho izy mahatakatra ny fizotran'ny sarotra, mahafantatra ny zavatra tsapantsika, ny eritreritsika ary mitarika antsika hanao izay mety hatao na dia tsy mazava loatra aza amin'izao fotoana izao.
Tsy misy fangatahana sarotra tsy voavaha amin'ny vavaka amin'ny finoana be dia be, mitana ny teny fikasany Andriamanitra.
Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka?
Afaka mivavaka ny vavaky ny Mpitsara ianao isaky ny mila izany.
Tsy manam-potoana, minitra, andro amin'ny herinandro na fandaharam-potoana izy. Tsy maintsy mivavaka ianao rehefa mila ary rehefa manana sitrapo sy finoana ianao.
Vavaka ho an'i Saint Martin Knight